Vampire Ihe E Mere, ama Anne Rice saga. | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
John Ortiz | | Emelitere na 21/09/2019 19:01 | Ndị edemede, Egwu efu, ụdịdị, Akwụkwọ, Novela, oké ụjọ
The Vampire diaries bu akwukwo a ma ama nke onye ode akwukwo America bu Anne Rice dere. Edere ya na nzuzo, akwụkwọ gothic na ụjọ, ebe ọ na-atụle na igodo oge a akụkọ ifo nke vampire agụụ ọbara, agụụ na ọnwụ. Saga a enweela ọdịbendị dị mkpa n’ụwa niile. Kemgbe mmalite nke nkeji mbụ ya, Ajụjụ ọnụ nke vampireNa 1976, erere ihe karịrị otu narị nde n'etiti akwụkwọ niile mejupụtara usoro ahụ.
Offọdụ n'ime aha nke The Vampire diaries eburu na fim na brodway. Mgbanwe kachasị ewu ewu bụ ihe nkiri Hollywood Ajụjụ ọnụ nke vampire (1994), dabere na akwụkwọ onyinye ahụ. Ọ bụ Neil Jordan duziri ya na Tom Cruise, Brad Pitt, na Antonio Banderas na-agụ akụkọ.
1 Banyere onye edemede
2 Eluigwe na ala nke Diary Vampire
2.1 Ihe odide na akwukwo nke saga
3 Mmepe nke ibé na ịkọ akụkọ
3.1 Onye mbu akuko
3.2 Ambovalent protagonist
3.3 Ezigbo vampires
4.1 Lestat nke Lioncourt
4.2 Louis nke Pointe du Lac
4.4 Ugochukwu David
5 Vampire Chronicles, a tupu na mgbe na na akwụkwọ akụkọ vampire
Anne Rice bụ onye edemede America nke amụrụ na New Orleans na Ọktọba 4, 1941. Na mgbakwunye na The Vampire diaries edela akwukwo ndi ozo dika Mayfair amoosu, Ihe E Mere Ndị Mmụọ Ozi y Ramses na-akọcha, ha niile nwere isiokwu karịrị nke mmadụ. Offọdụ n'ime ndị a ịkekọrịta mkpụrụedemede na The Vampire diaries.
Igha site na Iso Christianityzọ Kraịst, na-ekweghị na Chineke na laghachi na Iso Christianityzọ Kraịst na ndụ ya niile, emetụtala ọrụ nke Anne Rice. Edere aha kachasị nke ọma na ahịa na mmetụta ọdịnala kachasị n'oge oge ekweghị na Chineke nke onye edemede.
O nwetara aha ụwa site na 1970s na 1980s, mgbe e bipụtara ha Ajụjụ ọnụ nke vampire, Ghara vampire ahụ y Nwanyị nke ndị a bụrụ ọnụ (nke ikpeazụ, ọ dị mwute ikwu, enweghị mmegharị dị mma na sinima,, nnyefe mbụ nke The Vampire diaries. Okwesiri ighota na mmetuta nke akwukwo ndia n’edeputa ndi ohuru buru ibu; n'eziokwu, enwere ike ikwupụta ya Chi ojiji, na akwụkwọ ndị ọzọ nke ụdị a nke taa jupụtara na shelf ụlọ ahịa na akụkọ banyere vampires nwere ọrụ Rice dị ka ntụaka.
Eluigwe na ala nke Diary Vampire
Saga a na-ewebata onye na-agụ ya vampires bụ onye nọ n'etiti ụmụ mmadụ kemgbe ọtụtụ puku afọ. A na-akọ akụkọ ihe mere eme banyere ndị a na ntọala na obodo, tumadi na Europe na North America. Ọ bụ ezie na ha anaghị eso enweghị mmasị na galik, obe, na ọla ọcha na vampires ndị dịbu na akwụkwọ, anwụghị anwụ na-anwụ site n'ehihie na ọkụ, ya mere akụkọ ndị ahụ na-emekarị n'abalị.
Akwụkwọ mbụ na usoro Ajụjụ ọnụ nke vampire malitere n'obodo San Francisco na narị afọ nke iri abụọ. Louis na-akọ ndụ ya dị ka vampire na mkparịta ụka nzuzo na otu nwoke aha ya bụ Daniel. Akụkọ ya mere n'etiti narị afọ nke iri na asatọ na nke iri na itoolu, site na "ọmụmụ" ya n'abalị n'ubi nke Louisiana na-elekọta Lestat. Ntọala onye edemede ahụ nwetara kwesịrị otuto, n'ihi na ọ na-ejikwa ụzọ dị ebube oghere, ọkụ na onyinyo, isi, odide na ụdị; arụmọrụ nkọwa ya dị mma nke na ọ na-ejide ma jide ma na-agụ ndị na-agụ ya na ibé ahụ.
Anne Rice na akwụkwọ Prince Lestat - foto nke Phillip Faraone.
Mmekọrịta rụrụ arụ dị n'etiti Louis na Lestat, na nghọtahie ha banyere ihe a na-anabata na ịme vampires, na-eme ka ọtụtụ saga ahụ. Ọnọdụ akwụkwọ akụkọ ahụ na-abụkarị ọhụụ na egwuregwu. Onye na - agụ ya na - eso ndị odide ahụ na njem ha site na narị afọ gara aga, na - aga ememe mbido, nnọkọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, ihe nkiri nke ime ihe ike na mkparịta ụka mkparịta ụka na akụkụ kachasị njọ nke isi obodo United States na Europe.
Ihe odide na akwukwo nke saga
Louis na Lestat sokwa Armand, Akasha, Marius, David Talbot, Merrick Mayfair, Claudia, tinyere ndi ozo dika ndi agwa. ugboro ugboro na usoro. The Vampire diaries Ọ nwere mpịakọta iri na atọ:
Ajụjụ ọnụ nke vampire (1976)
Nwanyị nke ndị a bụrụ ọnụ (1988)
Ahụ ohi (1992)
Memnoch ekwensu (1995)
Bido vampire ahụ (1998)
Ọbara na ọlaedo (2001)
Ebe nsọ (2002)
Ugwu obara (2003)
Onyeisi princeat ((2014)
Prince Lestat na alaeze nke Atlantis (2016)
Obodo nke ọbara (2018)
Mmepe nke ibé na ịkọ akụkọ
Onye mbu akuko
Akụkọ ihe mere eme na nkọwa nke vampires na-amalite site na mkparịta ụka ahụ Daniel, nwa okorobịa na-eme nchọpụta si San Francisco, na Louis de Pointe du Lac, vampire dị afọ 200 si Louisiana. Louis, dịka mmadụ, na-enwe ọtụtụ mfu na esemokwu ezinụlọ, na-adaba na oke ịda mbà n'obi ma na-arafu Lestat, bụ onye gbanwere ya ka ọ bụrụ vampire ka ọ bụrụ ọnwụ ọzọ.
Site mgbe ahụ gaa n'ihu, mgbanwe nke Louis na ụdị ndụ na nri nke ndị mmadụ n'abalị ka a na-akọ, n'okpuru ọkwa nke Lestat. Site na okwu Louis, onye na - agụ ya banyere ụwa gbara ọchịchịrị ma sie ike nghọta nke vampires. A na-eji akụrụngwa a nke ịkọ n'olu nke ndị protagonists na akwụkwọ ndị ọzọ na usoro.
Lestat de Lioncourt bụ onye protagonist nke The Vampire diaries, ebe ọ bụ na àgwà ya na-ekere òkè dị mkpa na nkata nke ọtụtụ akwụkwọ. A kọọrọ akụkọ banyere ezinụlọ ha na mpịakọta nke abụọ nke usoro ahụ, Lestat vampire, ọ bụ ezie na na nke mbụ isi agwa nke kọwara.
Anne Rice kwuru - akifrases.com.
Lestat dị aghụghọ, mara mma, nwee obi ọjọọ ma n'otu oge ahụ mara mma, njirimara ndị bụ isi nke antihero nke oge a. Site na mmekọrịta ya na Louis, Armand, na ndị ọzọ a na-ede na usoro ahụ, onye na-agụ ya ghọtara na ọ bụ onye na-eme ka mmadụ kwenye na onye aghụghọ, nke na-eme ka ọ dị ize ndụ na ọkwa mmadụ, karịa anụ ọhịa na-enweghị isi. Lestat, akụkọ ihe mere eme ya na omume ya, bụ isi ihe na-adọrọ mmasị ndị na-agụ saga ahụ.
Ihe eji mara vampires nke saga bụ mmadụ miri emi, ebe ọ bụ na ha nwere nnwere onwe ime nhọrọ na ha nwere ike ịnweta ọchịchọ, ikpe ọmụma, nkekọ mmetụta uche, na ọtụtụ ụdị mmetụta.
Ha bụ ndị na-eme ihe ike na anụ ahụ, na-ata ahụhụ mgbe ụfọdụ site na ịdị adị nke ha. A kọwara ha nke ọma ma na akparamaagwa akparamaagwa ha na mma elu ahụ ha, nke na-eme ka ịgụ akwụkwọ na-eri ahụ. N'ebe a, ọ dị mkpa inye Rice uru ọzọ, ebe ọ bụ na ọkwa zuru ezu nke ọ na-enye nkọwa anụ ahụ nke ndị protagonists na mmadụ ha na-enye ohere ịmeghachi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ etu esi eche n'echiche onye na-agụ ya.
Ejikọtara akụkọ na isiokwu miri emi
Site na njem nke Louis na Lestat e mepụtara atụmatụ dị iche iche na-eme ka onye na-agụ ya site na vampires na Egypt oge ochie. A kọkwara akụkọ banyere vampires ndị ọzọ dịka Armand, ndị amoosu dịka Merrick na ụmụ mmadụ dịka David Talbot, Rice jikọtara ya na nlezianya.
Site na mkpụrụ edemede ndị a, akwụkwọ ndị ahụ metụrụ isiokwu dị ka ọnwụ, ọdịiche dị n’etiti ekweghị na Chukwu na Kristiantinyekwara ikpe ọmụma, anwụghị anwụ, agụụ ihe ọjọọ, na nihilism.
Lestat nke Lioncourt
Lestat de Lioncourt bụ onye bụ isi nke saga na n'anya ya anyị maara ọtụtụ nkọwa nke akụkọ ahụ. A kọwara ya dị ka nwoke na-acha odo odo nwere anya na-adọrọ adọrọ ma maa mma. Ọ bụ onye France a ma ama ma jeere ụwa mmadụ ozi dị ka omee na nkume kpakpando kemgbe ọtụtụ narị afọ. Omume ahụ na-adọrọ mmasị, na-eme ka mmadụ kwenye, ma dị mpako, na-achọkwa banyere ndụ mmadụ. Akụkọ ya bụ otu n'ime ihe na-atọ ụtọ ma na-adọrọ mmasị nke Anne Rice.
Louis nke Pointe du Lac
Louis de Pointe du Lac na-anọchite anya ahụhụ nke vampire na-achọghị ịbụ otu. O nwere ugbo na Louisiana na narị afọ XNUMX. Mgbe nwanne ya nwụsịrị ọ na-enwe obi amamikpe ma chọọ igbu onwe ya, mana Lestat gbanwere vampire. Ya na Lestat na-alụ ọgụ mgbe niile maka mkpa na-enweghị ike ịchịkwa maka ọbara mmadụ. Ọ bụ ihe dị mkpa agwa na ibé, na otu onye nke na-agụ akwụkwọ ọkacha mmasị.
Ọ bụ nwa okorobịa Europe mara mma ma dị ọcha, na-egosipụta ịma mma nke vampires. Ọ bụ ọkà n’ise ihe. O nwere ụdị nwatakịrị nwanyị dị afọ iri na asaa, afọ nke ọ bụ Marius mere ka ọ ghọọ vampire. Characterdị a nwere ike jikọta ya na Dorian Gray a ma ama, site na Ihe osise nke Dorian Gray, Oscar Wilde, ma maka atụmatụ ya, na maka àgwà ya na mmalite nke nkata ahụ.
Onye edemede Anne Rice.
Ọ bụ mmadu, Superior of the Order of Talamasca, otu nzuzo nke raara nye ihe omuma banyere ememe ochie na ihe ndi ozo.. Nyere Louis aka ịjute mmụọ nke Claudia, nwa agbọghọ vampire nke Lestat tụgharịrị. Ya na Merrick Mayfair nwere mmekọrịta ịhụnanya.
Ọ bụ nwanyị mgbaasị sitere na New Orleans, sitere na ndị amoosu oge ochie. O nwere ikike nke na enyere ya aka ime ka ndi nwuru anwu. O nwekwara ikike nke iduhie mmadụ na vampires. Ọ bụ àgwà dị egwu ma dị omimi, otu n'ime ọkacha mmasị, na-enweghị mgbagha, nke ndị na-agụ Rice eluigwe na ala.
The Vampire diaries, a tupu na mgbe na na akwụkwọ akụkọ vampire
The Vampire diaries nyere vampires ọhụrụ ederede na omenala a ma ama. Ọ bụ otu n'ime sagas dị mkpa nke akwụkwọ Gothic oge a. Nke a bụ mmetụta ya, na n'ime iri afọ mgbe ọdịdị ya na mmepe ya, anyị hụrụ mwepụta nke sagas ndị ọzọ na ihe nkiri, akwụkwọ na telivishọn nke rutegoro vampires site na echiche dị iche iche, na-anwa ime ha ka ha bụrụ mmadụ ma bịaruo ndị mmadụ nso.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » ụdịdị » The Vampire diaries
Nkwupụta zuru oke mana ọ na-achagharị n'ihi na akwụkwọ ndị dị na foto isi nwere ihe kwekọrọ na "vampire chronicles" ndị ọzọ ...
Claudia, akwụkwọ ndị ahụ kwekọrọ na vampire chronicles nke a na-ekwu maka ha, naanị ha nwere mkpuchi dị iche iche, echere m na ọ dabere na onye mbipụta akwụkwọ wepụtara ya. Ugbu a, m na-agụghachi Queen of the damned na akwụkwọ akụkọ 2004, ọ nweghị ihe jikọrọ ya na nke ahụ. mana ama m na afọ ole na ole gara aga ha rere ya.
Kemgbe m gụrụ "Ajụjụ ọnụ nke Vampire" n'etiti afọ 80 ọ jidere m na m gara n'ihu na saga nke vampire chronicles, echekwara m na ọ nwebeghị onye edemede ọzọ nwere ụdị ụzọ a ga - esi kọwaa ma ihe odide na ebe ha na-ewere ọnọdụ ndị ahụ site na akwụkwọ.
Ahụrụ m ya n'anya ma na-atụ anya na m ga-emejupụta ọbá akwụkwọ nke m na aha ya.
Zaghachi Orlando Juárez Alfonseca
Ajụjụ ọnụ nke Inés Plana, onye na-akwado akwụkwọ akụkọ mpụ ọhụrụ nke Spanish.